SingForYou.net - yellownavy's Channel
yellownavy 's Channel
Contest Winner သီချင်းကိုဒီနေ့ဆို.....
Last Login: 02-01-2013 07:42
Channel Views: 10,727
I am ... you hate me or you love me kind of person. :)rnI love singing and appreciate friendship and good music.
Merry Blue Berry
A Very Warm Welcome to ALL music lovers...
Dob 09 Jan
Hobbies Singing, Playing Scrabble, Watching Tennis
Movies & Shows Beautiful Mind
Music As long as 'MELODY' attracts me...
ညီမလေးရဲ့သီချင်းလေးတွေ တော်တော်များများနားထောင်ဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်းရောက်လေ အဆိုလေးတွေပိုကောင်းလာလေလို့ ခံစားမိတယ်။ အသံလေးက ထူးခြားပြီး တော်တော်လေးကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ creative-minded ဖြစ်တာကိုတော့ သဘောအကျဆုံးပဲ ... သီချင်းလေးတွေ များများဆိုနော် ... အချိန်ရတိုင်း အားပေးနေမယ်။
shwepaleik on Jan 11, 2012
SFY ရဲ့လော့်စပီကာကြီးတစ်ဦးမို့လာရောက်အားပေးသွားပါတယ် ခင်ဗျာ..။ ကိုယ်ပိုင်ဟန်တွေ ကို သဘောကျသဗျာ...။
Phoehtaung on Jan 3, 2012
......YELLOW ရေ.....အ ချိန် ရ တုန်; သီ ချင်; နာ; ထောင် ဘို့ လာ ခဲ့ ပေ မယ့် လမ်; ခု လတ် မှာ မို့ ထင် ရဲ့ ကွန် နက် က မ ရှင် ဘူ;..........ဒီ အ တိုင်; ဘဲ နှုတ် ဆက် ပြီ; ပြန် သွာ; ပြီ နော်..... မ င်္ဂ လာ ရှိ သော နှစ် သစ် မှာ ပျော် ရွှင် မှု့ တွေ အောင် မြင် မှု့ တွေ အ မျာ; ကြီ; ပိုင် ဆိုင် ပါ စေ ဗျာ;...........
songchitthu009 on Dec 30, 2011
အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ စစ်နဲ့ဘရိုနဲ့ဆိုထားတာ ...ကောင်းလွန်းလို့ အဆုံးထိနားထောင်အားပေးသွားတယ်နော်...အားပေးလျှက်
chitkoko201 on Nov 5, 2011
you can sing well
SFY မှာလေးစားအားကျရတဲ့ အဆိုရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ စစ် yellow ဆီကို အလည်လာပါတယ်ရှင် ... ဘယ်လိုသီချင်းမျိုးကိုမဆို အသံနဲ့ လိုက်ဖက်အောင်သီဆိုနိုင်တယ်နော် ... အသံပါရမီရှင်တဦးအဖြစ် မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေပါတယ် စစ်ရေ... အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝလေးကိုအမြဲထာဝရ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေခဲ့ပါတယ်ရှင် ....း))
saungnge on Sep 8, 2011
မမ ရဲရဲရေ... လာလည်ဘီ... ဘာကျွေးမှာလဲ .. ဘာမှလဲကျွေးဖူးး( ဒါဆိုလဲ ချင်းတွေပဲ နားထောင်ပြီး ပြန်တော့မယ်... ဒါဘဲ သီချင်းနားထောင်ရတာ အရမ်းကောင်းလို့ စားတော့ဖူး ၀သွားပြီ ပြန်ပြီး)
Deih on Aug 13, 2011
စစ်ရေ..လည်လည်လာသွားတယ်... အငဲရဲ့ အကြည့် ဒူးရက်ဆိုထားတာလေး တအားခိုက်ပီးမနေနိုင်တဲ့နောက်ပေါ့..ဟီးဟီး...အသံဂျီးကိုအရမ်းခိုက်တယ်စစ်ရာ...း)))))
အသံအရမ်းကောင်းတဲ့ စစ်ရေ..ဘရို တာပိုးလေး စစ်ရဲ့ သီချင်းတွေ အားပေးနားဆင်ဖို့လာလည်သွားပါတယ်..ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ စစ်ရေ..
salinminthar on Aug 8, 2011
View All Recordings of yellownavy